Posted by yankin at 2:00 AM No comments:
written by mmhelpdesk at Friday, August 17, 2007
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကို ဘလော့ဂါများ အတွက် RSS version နဲ့ ထပ်ထုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
RSS Feed: http://samerss.myanmarcalendar.com
3) Side bar ဘက်တွင် "Add Page Element" ကို နှိပ်ပါ။
Posted by yankin at 12:12 AM No comments:
မင်းမော်ကွန်း၏ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဓာတ်ပုံ အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့
ဲ Tuesday, 04 August 2009
အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်တွင် လူအများ စိတ်ဝင်စားသည့် ဓာတ်ပုံတပုံ မကြာသေးမီက ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါပုံထဲတွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းမော်ကွန်း
၊ ဓာတ်ပုံဆရာဝဏ္ဏခွာနီး နှင့်အဖွဲ့က သင်္ဃန်းများဝတ်ဆင်၍ ကျောပြင်၊ ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်း စသည်တို့တွင်ထိုးထားသည့် ဆေးမင်ကြောင်များကို အသားပေးကာ မျက်နှာပေး အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်၍ သရုပ်ဖော်ထားသည်။
အဆိုပါပုံကို ကြည့်ရှုမိသူများက “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်နေလား၊ သာသနာတော်ကို စော်ကားတာလား၊ မဖြစ်သင့်ဘူး” စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသတ်မှတ် ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြသည်။
ထင်ရှားသည့် ဘလော့တခုဖြစ်သော “နစ်နေမန်း” ဘလော့တွင် အဆိုပါဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာတရားအရ ရိုသေလေးစား ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့် သားတော်များဖြစ်သည့် သံဃာတော်များ လွှမ်းခြုံရာ သင်္ဃန်းများကို ယခုကဲ့သို့ ဆေးမင်ကြောင်အတုများနှင့် ယခုကဲ့သို့သောမျက်နှာပေးများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းမှာ မသင့်တော်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မလုပ်သင့်ကြောင်း ကန့်ကွက်ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
“ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်ကတည်းက ဆေးမင်ကြောင် ဆိုတာ မပေါ်သေးတော့ ထိုးထားတဲ့သူ ရဟန်းဝတ်ခွင့်မရှိ ဘူးလို့ပညတ်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ အကယ်၍ ရဟန်းမဝတ်ခင်မှာ ထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒါတွေကို မပေါ်အောင်လို့ ဖုံးဖုံးနဲ့ နေရမှာပေါ့” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရဟန်းတပါးက သံဃာတော်များ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးခွင့် ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်သည်။
အဆိုပါ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ပါဝင်သည့် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းမော်ကွန်းနှင့် နာမည်ကျော်ဓာတ်ပုံဆရာဝဏ္ဏခွာနီး တို့အား ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပေ။
သို့ရာတွင် ၎င်းဓာတ်ပုံထဲ၌ ပါဝင်သူ ကာယကံရှင် တဦးကမူ အဆိုပါဓာတ်ပုံမှာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မတိုင်ခင်ကတည်းက အပျော်သဘောနှင့် ရိုက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ “နစ်နေမန်း” ဘလော့က မည်သို့မည်ပုံ ရရှိကာ တင်ထားသည်ကို မသိရှိကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ သူက နစ်နေမန်းဘလော့တွင် ရေးသားထားသည့် အချက်များမှာ လုံးဝ မှားယွင်းနေကြောင်းနှင့် ဓာတ်ပုံထဲတွင် ပါသူများ ထိုးထားသည့် ဆေးမင်ကြောင် များမှာလည်း အစစ်များသာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
နာမည်ကြီး ဟစ်ဟော့အဆိုတော် တဦးကလည်း ယင်းပုံနှင့်ပတ်သက်၍ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် ၃ နှစ်ခန့်က အပျော်သက်သက် ရိုက်ထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို မသိရှိကြောင်း ပြောပြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာရဟန်းတပါးဖြစ်သော အရှင်စန္ဒောဘာသာစာရ က “ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ဘာကြောင့်များ သာသနာတော်ကိုစော်ကားလိုက်တာလဲ” ဟူသည့် ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးသားထားပြီး အင်တာနက်ဘလော့ စာမျက်နှာများတွင် ကန့်ကွက်ဖော်ပြထားသည်။
သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းနှင့် အနုပညာသမား အုပ်စုတို့သည့် ယခုကဲ့သို့ သင်္ဃန်းဝတ်၍ သရုပ်ပျက်ပုံစံများနှင့် သာသနာတော်ကို မစော်ကားသင့်ကြောင်း၊ အမှားကို ကျုးလွန်းပြီးလျှင်လည်း တောင်းပန်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆရာတော်များနှင့် သာသနာကိုမြတ်နိုးကြသော ပြည်သူလူထုကို ကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားသည်
Posted by yankin at 12:05 AM No comments:
အမေ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံး ငြိမ်ချက်သားကောင်းလှသည်။ ကျွန်တော်လည်း အမေကို ဘာပြောရမှန်း မသိသဖြင့် စာလေးရေးလိုက် တောက်တိုမယ်ရလေးတွေ ကောက်လုပ်လိုက်ဖြင့် အချိန်ကို ဖြုန်းနေလိုက်သည်.
.......................အမေ့ကို.........ဘယ်လို စကား စရ ရင် ကောင်းပ..............................
ယုတ်စွအဆုံး..ငါ့သား...ထမင်းစားတော့လေ...ဟုပင် မဆို....ထိုကြောင့် ကျနော်ဘဲ အမေ့ကို စကားမရှိစကားစရှာ ကာ ခေါ်လိုက်တယ်...
.................ဆန်ပြာနေတာပေါ့ဟဲ့................ငါ့သားက...ဒီနေ့...ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာဖြစ်နေတာလဲ.................အမေ့စကားကြောင့် ကျနော် အားတက်ရပါသည်။
ကျနော်အမေ့ကို ပြောမယ်လို့ အားတင်းလေလေ...စိုးရိမ်စိတ်တွေက..ပိုလာလေလေ...
ငါ့သား...ဟိုတောင်ဘက်ရွာက ...ကိုကြည်ကို ..သိတယ်မို့ လား..အမေဆိုသည်။။
နက်ဖန်ခါ..သူ့ သမီးလေး ..မင်္ဂလာဆောင်ကို..အမေတို့ ကို...ဖိတ်သွားတယ်ကွဲ့ ...
Posted by yankin at 12:56 PM No comments:
မြောက်အရပ်က နံနက်ခင်း လေးညှင်းနဲ အတူ တေးသံသာ လွင့်လာတယ်..အမေနဲ့ ရွာကိုလွမ်းတဲ့ သီချင်း လေးပေါ့...တောင်တန်းတွေဝေ့၀ိုက်ပြီး သစ်ပင်လေးတွေနဲ့ စိမ်းလမ်းနေတဲ့ ရွာလေးမှာ အမေရှိတယ်..အမေက အဲဒီရွာလေးမှာ နေထိုင်ပြီး ဘ၀ကို ကုန်ဆုံးမယ်ထင်တယ်...ဘယ်ကိုမှ အမေဟာ ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူး ပေမဲ့ သားဆိုးလေးရှိတဲ့နေရာကိုတော့ အမေရောက်ရောက်လာတတ်တယ်....
အမေရောက်လာတိုင်းလည်း သားကို အမြဲစိတ်ပူပင်နေတဲ့အကြောင်း အမေပြောပြတတ်လေရဲ့ ...သားကို ဒီလောက်ထိ စိတ်ပူပင်တတ်ရန်ကော အမေရယ်...ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်မပြေတိုင်း အမေကို သတိရတယ်. သားဘ၀မည်သို့ ရှေ့ ဆက်လျှောက်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားတိုင်းလဲ အမေမျက်နှာလေး ပြေးပြေးပေါ်လာတယ်.
လူမှူရေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့....သားကို အမေ သာ ခု သိမယ်ဆိုရင်....အမေ သားကို ဘယ်လိုများ ပြောအုံးမှာပါလိမ့်.....
Posted by yankin at 8:22 AM No comments:
Blog တွင် မြန်မာပြက္ခဒိန် ထည့်သွင်းနည်း ...
Tuesday, August 4, 2009 မင်းမော်ကွန်း၏ အငြင်းပွ...
အမေ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံး ငြိမ်ချက်သားကောင်းလှသည်။ ...
အမေနဲ့ ရွာကိုလွမ်းတယ် မြောက်အရပ်က နံနက်ခ...